Oge ha na-akanye n'akwụkwọ iwu bụ iwu ahụ nke ga-akwụsị oké ego ahụ a na-emefu n'akwamuozu na steeti ahụ, ndị Ụlọ Omeiwu ahụ sịrị na ọ bụrụla arụ ime mmemme akwamozu karịa nanị otu ụbọchị na steeti ahụ.
Tupu iwu a, ọtụtụ obodo na-eme mmemme akwamozu ihe dịka mkpụrụ ụbọchị atọ.
Iwu nke a etiri ugbua bụzi nke onye ahụ na-anọchite anya Anaọcha nke abụọ na Ụlọ Omeiwu steeti ahụ, Charles Ezeani, kwupụtara na Iwu Akwamozu ahụ bụ nke ga-eme ka ewere kwụsị oké ego ahụ a na-akwafusị n'ebe mmemme akwamozu dị na steeti ahụ.
Iwu ahụ bụ nke kwuziri na n'ebe mmadụ ọ bụla nwụrụ, "Ọ nweghị onye ga-edebe ozu ọ bụla na-ebe a na-echekwa ozu karịa ọnwa abụọ site n'ụbọchị onye ahụ nwụrụ, ebe mmemme akwamozu na steeti ahụ ga-abụzi nanị otu ụbọchị".
Iwu ahụ gakwara n'ihu kwụsị imebisi ihe, ịgba mkpọnala, ịgụ abụ otuto, ịnọchi ma ọ bụ ịmechi okporo ụzọ oge mmemme akwamozu ọ bụla na-aga n'ihu na steeti ahụ.
Iwu ahụ kwukwara na, "Ọ nweghị onye ga-amanye onye ọ bụla na-akwa ozu iri uju karịa otu izu ụka site n'ụbọchị akwamozu."
Ọ gakwara n'ihu kwuo na mgbe akwamozu na-aga n'ihu, ezinaụlọ ahụ na-akwa ozu "ga-enye ụmụnna, ndị enyi, ndị ikwu na ibe na ndị ọzọ bịara isonyere onye ahu n'iri uju nrí otu ha siri chọọ.
Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Ezeani kwuru na Kọmitii ga-ahụ na iwu a guzoro ga-ebido ọlụ ozigbo gọvanọ na-achị steeti ahụ nyere nkwado ya.